हेर्नुस त जलाएर श्रीमान भागे, अस्पतालमा श्रीमती अलपत्र ! « Online Tv Nepal
हेर्नुस त जलाएर श्रीमान भागे, अस्पतालमा श्रीमती अलपत्र !
Published :7March, 2020 4:23 pm
२३ फागुन, काठमाडौं । ३४ वर्षकी रिना बल अहिले शुष्मा कोइराला मेमोरियल हस्पिटलमा छिन् । शरीरका अधिकांश भाग जलेका छन् । उपचारको अभावमा खुट्टा र हात कुहिएर झर्लाजस्तै भएको छ । रिमा बोल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेकी छिन् । उनको विभत्स शरीर हेर्नै गाह्रो छ ।
रिमाको दाहिने हर प्यारालाइसिसले गालेको छ । त्यो भाग राम्रोसँग चल्दैन । यस्तो अवस्थामा पुगेकी उनलाई हेर्ने कोही आफन्त छैनन् ।
अहिले सन्तोषराज सापकोटाले उनको रेखदेख गरिरहेका छन् । सन्तोषसँग रिमाको नाता मानवता मात्र हो ।
रिमाको परिवार हेटौडा उपमहानगरपालिका – १४, लक्ष्मीचोकमा बस्थ्यो । रिमाबारे अहिलेसम्म प्रहरीको अनुसन्धानमा यसबाहेक थप जानकारी आएको छैन । उनले आफ्नै नाम पनि जलेको हातले जबरजस्त लेखेकी हुन् । एक कक्षामा पढ्ने सिकारु विद्यार्थीले जसरी ।
र, रिमाले लेखिन् आफ्नी नौ वर्षीय छोरी भएको कुरा पनि । रिमालाई थाहा छैन, पशुवत व्यवहार गर्ने श्रीमानले छोरीलाई कसरी राखेका छन् ।
रिमा पाँच वर्ष पहिले नै प्यारालाइसिसले ढलेकी थिइन् । तर, अशक्त रिमालाई श्रीमान् कुमार बलले गत १६ माघमा जिउँदै आगोमा हालिदिए । यो पनि रिमाले कापीमै लेखिन् । यति लेख्न उनलाई विश्वयुद्ध जित्न जत्तिकै सकस परेको चिकित्सक बताउँछन् ।
कुमार आफंैले १७ माघमा काठमाडौंस्थित हस्पीटल ल्याइपुर्‍याए । त्यसबेला कुमारसँग रिमाकी बहिनी पनि आएकी थिइन् ।
आगोले शीरदेखि पाउसम्म जलेको थियो । तत्काल आइसीयुमा राखेर अपरेशन गर्नुपर्ने अवस्था थियो । त्यसका लागि अस्पतालले कुमारलाई खर्चको बिल थमायो । राजधानी अस्पतालका म्यानेजिङ डाइरेक्टर शरद अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हामीले अपरेशनका लागि डेढ लाख रुपैयाँ जति लाग्छ भनेका थियौँ ।’
भोलिपल्ट श्रीमान् पैसा खोज्न हेटौडा जान्छु भन्दै अस्पतालबाट निस्किए । तर, दुई दिनसम्म फर्किएनन् । फोन लगाउँदा उनले भन्थे, ‘म पैसा लिएर आउँदै छु ।’
तर, आएनन् । अर्को दिन फोन गर्दा भने, ‘पैसा लिएर आउँदै थिएँ, कुलेखानीमा हरायो । आउँदै छु ।’
त्यसपछि न श्रीमान आए, न उनको फोन नै आयो । अहिलेसम्म कुमारको फोन ‘स्वीच्ड अन’ भएको छैन । अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘उनले अस्पतालमा बुझाएको पैसा भनेको पाँच हजार रुपैयाँ मात्र हो ।’
यता रिमाको अवस्था झन्–झन् खराब भइरहेको थियो । उनले भोकमा पनि खान पाइनन् । न राम्रो उपचार नै पाइन् । पैसा नै नभएपछि अपरेशन भएन ।
रिमाको शरीर अस्पतालकै शैय्यामा उपचार कुरेर बसिरह्यो । अधिकारी सुनाउँछन्, ‘बहिनीलाई खाना ल्याइदिनुस् भन्दा चामल नै छैन, कहाँबाट पकाएर ल्याउने जस्तो प्रतिक्रिया दिन्थे ।’
सामान्य ड्रेसिङबाहेक उनको उपचार हुन सकेन । किनकि यहाँ पैसाले मानवतालाई कल्र्याप कुर्लुप निलेको छ । यतिसम्म कि पैसाले आफ्नी श्रीमतीसमेत चिन्दैन । र, कुनै श्रीमान आफ्नै श्रीमतीलाई जिउँदै जलाउन तयार हुन्छ ।
श्रीमान हुनुको एउटा तीतो परिणाम भोगिरहेकी रिमालाई हेर्ने कोही भएनन् । बेवारिसे रिमाले विभत्स शरीर बोकेर ३५ दिनसम्म जर्जर र बेवारिसे दिन कटाइन् ।
अस्पतालले प्रहरी प्रभाग कालिमाटीका डीएसपी रुगमबहादुर कुँवरलाई फोन ग¥यो । कुँवरले बिरामीको अवस्था हेरेर उपचारमा समन्वय पनि गरे । युट्युव सञ्चालक सन्तोष पनि अस्पतालमा पुगे । र, भिडियो बनाए ।
सन्तोष भन्छन्, ‘हामी जाँदा शरीर कुहिएको थियो । बेडमा हर पनि नफर्काएकाले सुतेको भाग र हिप काम लाग्ने अवस्थामा थिएन ।’
सन्तोषले उनलाई उपचारका लागि सहयोगको आग्रह गरे । र, डीएसपी कुँवरले बल्लतल्ल अस्पतालको व्यवस्थापन गरे । अनि, रिमालाई सुस्मा मेमोरियल अस्पतालमा पु¥याइयो ।
सन्तोष भन्छन्, ‘उपचार नपाएर मान्छेलाई मर्न दिनुहुँदैन भनेर मैले यहाँसम्म ल्याएको हुँ ।’
रिमा सुस्मामा पुगेको दुई दिन मात्र भएको छ । तर, उनका नाममा दुई लाखभन्दा बढी खर्च निस्किएको छ । अस्पतालका शरद भन्छन्, ‘आफ्नो मान्छे नभएकाले अपरेशन गर्ने कुरा भएन । तर, हामी बिरामीका लागि साढे दुई लाखभन्दा बढी खर्च गरिसकेका छौँ ।’
अस्पतालले औषधीमा करिब चार लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने बताएको छ । अपरेशन, बेड र खाना निःशुल्क गरिएको छ । सन्तोष भन्छन्, ‘अहिलेसम्म ५० हजार रुपैयाँमात्र जम्मा भएको छ । सहयोग गरेर रिमा दिदीलाई बचाउनुस् ।’
अस्पतालले आइतबार पहिलोपटक अपरेशन गरेर जलेको भागमा पट्टी बाँधिदिएको छ । ‘शरीरको १२ प्रतिशत भाग जलेको छ । तर, घाउ पुरानो भएकाले दाहिने हातको आंैला र जोर्नी नचल्ने भएको छ’, सुस्मा मेमोरियिलका डा. सन्तोषजंग भण्डारीले भने, ‘आज हामीले घाउ सफा गरेर नक्कली छाला हालिदिएका छौँ ।’
यस्तो प्रकारको अपरेशन तीनपटक गरेपछि मात्र छाला प्रत्यारोपण गर्न मिल्ने डा. भण्डारीले बताए । उनले भने, ‘पाँचदेखि छ पटकसम्म अपरेशन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
बेखबर श्रीमानलाई भने प्रहरीले खोजिरहेको प्रहरी प्रभागका कालिमाटीका डीएसपी रुगमबहादुर कुँवरले बताए ।
उनले भने, ‘हेटौडाका एसपी साप सुशीलसिंह राठोरलाई जानकारी दिइसकेको छु । अहिले रिमाका श्रीमान घरमा छैनन् भन्ने खबर आएको छ ।’